Semalt: किन स्प्याम टिप्पणीहरू खराब छन् र तिनीहरूलाई कसरी पहिचान गर्ने?
यदि तपाईंसँग एक व्यापार वेबसाइट वा एक ब्लग छ, संभावना छ कि तपाईं स्पाम टिप्पणी को समस्या भेट्नुहुनेछ। तपाईंको ब्लग जति प्रसिद्ध हुन्छ, अधिक स्पाम टिप्पणीहरूले यसलाई प्राप्त गर्ने सम्भावना हुन्छ। दुर्भाग्यवस, निराश हुनु वा स्पाम टिप्पणीहरूबाट मुक्त हुन केही प्लगइनहरू स्थापना गर्नु बाहेक त्यहाँ अरू केहि छैन।
प्रतिक्रियाहरू, पिंगब्याकहरू, र ट्र्याकब्याक:
हामी अगाडि बढ्नु अघि , Semalt का शीर्ष विशेषज्ञ फ्रान्क Abagnale, यहाँ यी3सर्तहरू बीचको भिन्नता वर्णन गर्दछ:
प्रतिक्रियाहरू - टिप्पणीहरू सिर्जना गरिन्छ जब एक बाट वा मानव आफ्नो ब्लगको टिप्पणी क्षेत्र आफ्नो विचारहरु वा विचार व्यक्त गर्न प्रयोग गर्दछ।
पिंगब्याक्स - पिंगब्याक स्वचालित रूपमा सिर्जना गरिन्छ जब एक व्यक्तिले तपाईंको पोष्टलाई आफ्नै वेबसाइटमा लिंक गर्दछ।
ट्र्याकब्याक - ट्र्याकब्याक स्प्यामरहरू द्वारा म्यानुअल सूचना हो कि उनीहरूले तपाईंको ब्लगमा हिट गरेका छन् र स्प्याम टिप्पणीहरूका साथ तपाईंलाई जलन गर्न एक स्वचालित प्रक्रिया सिर्जना गर्दछ।
दुर्भाग्यवस, ट्र्याकब्याक, पिंगब्याक, र टिप्पणीहरू सबै तपाईंको वेबसाइटको लागि हानिकारक छन्, र तपाईंले कुनै पनि मूल्यमा उनीहरूबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ।
किन स्पाम टिप्पणीहरू खराब छन्?
केही वेबमास्टरहरू र ब्लगरहरूले टिप्पणीहरूको संख्या फुलाउने र अनुप्रयोगहरूलाई अनुमोदन राख्ने टिप्पणीहरू उनीहरूले वैध पाए। उनीहरूलाई यो पनि थाहा छैन कि स्पाम टिप्पणीहरू उनीहरूको ब्लगमा पुग्यो र उनीहरूको लागि समस्याहरू निम्त्याउँदैछ।
गुगल र अन्य खोज ईन्जिनहरूले नराम्रो लिंकहरूमा क्र्याक गर्दै छन्। यसले कम क्वालिटी वा खराब लिंक भएका साइटहरू र ब्लगहरू समावेश गर्दैन, तर यसले सबै प्रकारका वेबसाइटहरू समावेश गर्दछ जसले टिप्पणी सेक्सनहरूमा आफ्नै लिंकहरू सिर्जना गर्न प्रयास गर्दछ। गुगलले अन्य वेबसाइटहरूमा ब्याकलिks्क भएको धेरै टिप्पणी सहित ब्लग वा वेबसाइटहरू मन पराउँदैन।
स्पाम टिप्पणीहरूले संयम र समझको कमी देखाउँदछ। यो सत्य हो कि स्पाम टिप्पणीहरूले प्रमाणित गर्दछ कि तपाईंसँग समझको कमी छ र टिप्पणीहरूलाई ठीकसँग मोडरेट गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं एक टेक्नोलोजी वेबसाइट छ र सवारी साधन वा शिक्षा सम्बन्धित टिप्पणीहरू प्राप्त गर्नुभयो, संभावना छ कि कसैले तपाईंको लिंक फिर्ता तपाईंको टिप्पणी क्षेत्र मा छोड्न कोशिस गर्दै छ र यो तपाईं परिमार्जन गर्नु पर्छ।
तपाइँको आगन्तुकहरु तपाइँको उत्पादनहरु वा सेवाहरु मा विश्वास हराउन हुनेछ। यसको मतलब जब कुनैले टिप्पणी क्षेत्रमा लि area्कहरूमा क्लिक गर्दछ र संदर्भ बाहिर केहिमा पुनः निर्देशित गरियो, उसले तपाईंको ब्रान्डमा विश्वास गुमाउन सक्छ र भविष्यमा तपाईंको उत्पादनहरू र सेवाहरू खरीद गर्दैन।
कसरी स्पाम टिप्पणीहरू पहिचान गर्ने?
यो स्प्याम टिप्पणीहरू पहिचान गर्न गाह्रो छ, र केही ब्लगरहरू र वेबमास्टर्सले हरेक दिन केवल टिप्पणीहरूको एक ठूलो संख्यालाई अनुमोदन गर्दछ। तर तपाईं निम्न कुराहरू दिमागमा राख्न सक्नुहुन्छ:
के तपाइँ तपाइँको पाठकहरू असान्दर्भिक चीजहरूमा क्लिक गर्न चाहनुहुन्छ? यदि होईन भने, त्यसोभए तपाईंले टिप्पणीहरूलाई अनुमोदन गर्नु हुँदैन जुन तपाइँको लेखसँग सम्बन्धित छैन र तपाइँको शीर्षकहरूसँग केहि गर्न सक्दैन। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं ती टिप्पणीहरूमा वेबसाइटहरूको लिंकहरू हटाउन सक्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई थोरै सम्पादन गर्नुहोस् र उनीहरूलाई अनुमोदन गर्नुहोस्।
वास्तविक नाम र ईमेल आईडी एक टिप्पणी अनुमोदन गर्दा जाँच गरिनु पर्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि व्यक्तिले टिप्पणीमा केही कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गरेको छ, तर त्यहाँ कीवर्ड स्टफिंग हुनुहुन्न। यसको लागि तपाई एसईओ स्प्यामर प्लगइन स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ।
के टिप्पणी सम्बन्धित छ वा तपाईंको पोष्टको लागि विशिष्ट हो? तपाइँले यसलाई ठीकसँग जाँच गर्नुपर्नेछ यदि टिप्पणी तपाइँको लेखसँग सम्बन्धित छ वा छैन। त्यहाँ उनीहरूको साइट वा ब्लगमा सम्बन्धित छैनन् भने ठूलो संख्यामा टिप्पणीहरू अनुमोदन राख्नु आवश्यक पर्दैन।
जब यो स्पाम टिप्पणी ट्र्याक गर्न आउँदछ, तपाईंले केवल माथिको बिन्दु मनमा राख्नुपर्दछ, र तपाईं ठीक हुनुपर्दछ। केही वेबसाइटहरू र ब्लगहरूले स्प्याम टिप्पणीहरू हटाउनको लागि विशेष प्लगइनहरू प्रयोग गर्दछ, जस्तै Akismet।